သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး | Page 11 | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
29.5.2016 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
1) အနားယူပါ။ အနားယူနေစဉ်အတောအတွင်းမှာ ဒူးခေါင်းအောက်မှာခေါင်းအုံးခံထားပါ။
2) ရေခဲကပ်ပါ။ နာကျင်မှုတွေသက်သာအောင် 10 မိနစ် မှ မိနစ် 20 ထိကြ...
အိုမီဂါ3ဖက်တီးအက်ဆစ်အကြောင်းသိကောင်းစရာ
26.5.2016 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
အိုမီဂါ3ဖက်တီးအက်ဆစ်3မျိုးရှိပါတယ်။ EPA နဲ့ DHA လို့ခေါ်တဲ့ အိုမီဂါ3ဖက်တီးအက်ဆစ်2မျိုးက ငါးအချို့မှာတွေ့ရပြီး ALA လို့ခေါ်တဲ့ တစ်မျ...
22.5.2016 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
သက်သက်လွတ်စားတာကြောင့် သွေးတိုးရောဂါကိုသက်သာစေနိုင်တယ်လို့ လေ့လာမှုများအရသိရပါ တယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှလေ့လာသူများက လူပေါင်း 22,000 ပါ၀င်တဲ့ လေ့...
15.5.2016 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
အိပ်ရေးမ၀ခြင်း၊ နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်မပျော်ခြင်းတို့ကြောင့် နာတာရှည်ရောင်ရမ်းမှု များ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ၊ အ၀လွန်ရောဂါ၊ အ...
အသက် 60 ကျော်အရွယ်တွင် ကျန်းမာနေစေရန် လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်သင့်
12.5.2016 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
အသက် 60 ကျော်လူကြီးများအနေနဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအခက်အခဲမျာ...
အသက်ကြီးသူတိုင်း သတိထားသင့်တဲ့ ဗီတာမင် B12 ချို့တဲ့ခြင်း
အားအင်လျော့နည်းခြင်း၊ နုံးခွေခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်အားနည်းခြင်းတို့ဖြစ်နေပါက အသက်အရွယ်ကြီးလာတာ ကြောင့်ပဲဖြစ်ရမယ်လို့ တထစ်ချ မခံယူသင့်ပါဘူး။ ဗီတာမင...
အသက် 60 ကျော် လူကြီးများအတွက် အာဟာရပြည့်၀အောင် စားသောက်နည်း
8.5.2016 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ အစားသိပ်မစားနိုင်တာကြောင့် စားလိုက်သမျှအစားအစာအားလုံးဟာ အာဟာရပြည့်၀နေဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့ အာဟာ...
မိဘတို့စိတ်ကျရောဂါမဖြစ်ရအောင် သားသမီးတို့သိထားသင့်သော ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုများ
5.5.2016 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
မိဘတွေဟာအသက်အန္တရာယ်ရလာတာနဲ့အမျှ သားသမီးတွေရဲ့ နွေးနွေးထွေးထွေး ကြင်ကြင်နာနာ ပြောဆိုဆက်ဆံမှုကို လိုလားလာတတ်ကြပါတယ်။ ၎င်းတို့ရဲ့ရင်ခွင်မှ သာ...
Copyright © 2014 - 2022 Dr Myanmar. All Rights Reserved.